Guqula isimilo sabathengi ngeBadegeville | IMarTech Blog
I-Badgeville: Ukukhuthaza ukuGuquka kokuZiphatha ngokuGamification
NgoLwesihlanu, ngoJuni 22, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Isakhono sokutshintsha indlela yokuziphatha kwabathengi inokuba sisipho esingcwele sabathengisi be-e. Umceli mngeni ngokubandakanya abathengi kwimeko yanamhlanje kukunyaniseka kwabo okomzuzwana xa bejamelene neendlela ezininzi. Ukusombulula oku, amashishini kufuneka atshintshe izicwangciso ekuhambeni okanye abonelele ngento efunwa ngumthengi ngephanyazo. Oku akusoloko kunokwenzeka ngezixhobo ezinqabileyo zanamhlanje. Uhlengahlengiso Isicwangciso esinceda abathengisi ngale mizamo.
Enye inkampani yokudlala esematheni ngoku ngoku IBadgeville. Kutshanje iBadgeville iye kolunye udidi lwenkxaso-mali, yafumana i- Ulungelelwaniso Wiki, kwaye yasungulwa ubucukubhede bentlalo. IBadgeville ibonelela ngesixhobo esibonelela ngezisombululo kwezi ngxaki zixinzelelweyo.
IBadgeville isebenzisa ubucukubhede bomdlalo, ubucukubhede bentlalo kunye negama lobuchwephesha kunye nokujonga indlela yokusebenza okanye indlela yokuziphatha okanye undwendwe lwewebhusayithi. Inkqubo eyomeleleyo inokusebenzisa uhlalutyo olwenziweyo ukuphendula undwendwe ngokusekwe kulondwendwe lubona lulungile okanye lunomdla. Kwinqanaba leBadgeville ulungiso oluhle Inkqubo liqonga lokuziphatha elilandelela indlela yokuziphatha kwaye lisebenzise oomatshini bokuzibandakanya abaqinisekisiweyo ukuphucula unxibelelwano lomsebenzisi, ukubandakanya umthengi ngcono kunye nokuphucula imveliso.
Eli Qonga lokuziphatha libandakanya ingqokelela yezixhobo ezixabisekileyo.
Injini yokuziPhatha ichonga kwaye ivuze indlela yokuziphatha yomntu enexabiso eliphezulu.
Oomatshini bokuzibandakanya kuphucula ukubandakanyeka kwabatyeleli ngokusebenzisa ingxelo yexesha lokwenyani ukubonelela ngomdlalo wentlalontle onjengamava endwendwe.
Uhlalutyo lokuziphatha lubonelela ngamashishini ngedatha kunye nokuqonda okwenza ukuba ishishini liqonde indlela abantu abazibandakanya ngayo ngokufanelekileyo nabo.
Iwijethi Studio kunye nezixhobo zoPhuculo yingqokelela yezixhobo ezinamandla zokuphucula ezivumela ishishini ukuba lisete elinomdla kwaye lomelele Imigangatho yokuzibandakanya kwiindawo zabo.
Ukuhambisa ukugembula kubathengi beshishini kunye nabasebenzi, iBadgeville ibonelela ngeNkqubo-sikhokelo yokuziPhatha, ezizisombululo ezijikajika izinto ezahlukileyo zeQonga lokuziphatha.
The Isakhelo esingqinayo esingundoqo ivumela ishishini ukuba liqeshe i-gamification kunxibelelwano oluqhelekileyo okanye lomntu ngamnye.
The Isakhelo seengcali zoluntu ityebisa amaqonga oluntu.
The Isakhelo sePiramidi soKhuphiswano ixelela ishishini ukuba yeyiphi inkqubo ejolise kubathengi esebenza kakuhle.
The Isikhokelo sesikhokelo ivumela amashishini ukuba athumele inkuthazo kubathengi okanye kubasebenzi ukuba baziphathe ngendlela enqwenelekayo.
The Isakhelo somSebenzisi woLuntu Unceda ishishini lamkele ubuchwephesha beshishini lasekuhlaleni ngcono ngenkqubo yemivuzo.
The Inkqubo-mngeni yeNkampani inokuba yimpendulo kwimithandazo ye-HR, kuba ivumela ukudala ukhuphiswano olumnandi kunye nokunikezelwa okujolise ekwandiseni ubudlelwane phakathi kwabasebenzi kwaye ngaloo ndlela kuphuculwe imveliso kunye nokuziphatha.
IBadgeville ikwabonelela nge Studio Widget- ingqokelela yeewijethi zokukhulisa ezinokulungiswa kunye nokuqwalaselwa. Ezi widgets zibandakanya iibhodi eziphambili, impumelelo ebonakalayo, umsebenzi wexesha lokwenyani, inqanaba labahlobo, i-header mini-profile, izaziso kunye nokunye.